München ama Munich (Austrian-Bavarian: Minga [mɪŋ (ː) ɐ]) waa caasimadda iyo magaalada ugu badan ee gobolka Jarmalka ee Bavaria, on bangiyada Wabiga Isar waqooyiga ee Bavarian Alps. München sidoo kale waa magaalada saddexaad ee ugu weyn Germany, ka dib Berlin iyo Hamburg, iyo magaalada 12aad ee ugu weyn ee Midowga Yurub, oo leh dad ku dhowaad 1.5 milyan. Gobolka München caasimadda waxaa ku nool 6 milyan oo qof.
Magaaladu waa xarun weyn oo farshaxan, tiknoolajiyad, maaliyad, daabacaadda, dhaqanka, hal-abuurka, waxbarashada, ganacsiga, iyo dalxiiska ee Jarmalka iyo Yurub waxayna ku raaxeeysataa heer aad u sareeya iyo tayada noloshooda, marka ugu horeysa ee Jarmalka iyo adduunka saddexaad ah sida ku cad 2018 Baaritaanka Mercer, waxaana lagu qiimeeyay magaalo-nololeedkii dunida ugu noolaa ee ay samaysay Sahaminta Tayada ee Monocle ee 2018 Sida laga soo xigtay Machadka Cilmi-baarista Caalamiga ah iyo World Rankings Munich waxaa loo tixgeliyaa magaalo caalami ah, sida 2015.
Magaca magaalada waxaa laga soo qaatay jumlada hore ee Jarmalka Highen / Middle Munich Munich, oo micnaheedu yahay "by ra'yiga". Waxay ka soo jiidatay riwaayadaha Benedictin amar, kuwaas oo ku orday riwaayad ah meeshii uu ka dambeeyay si uu u noqdo magaalada Old Munich ee Munich; Sidaa daraadeed riwaayad ayaa lagu sawiray dharka magaalada.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=München&oldid=223252"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Nofeembar 2021, marka ee eheed 10:34.